प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति: प्रचण्ड दरवारिया, विप्लव आतंककारी — Sanchar Kendra
प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति: प्रचण्ड दरवारिया, विप्लव आतंककारी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देखि आफ्नै पार्टीका दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डको समेत विरोध गरेका छन् । ओलीले हजो बालुवाटारमा पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा प्रचण्डकै समेत विरोध गरेका हुन् । उनले भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वर्तमान संविधान र व्यवस्थाप्रति जनाएको असन्तुष्टी र चलाइरहेको आन्दोलनलार्इ ओलीले आतंकवादी क्रियाकलाप भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पलको मर्यादाको ध्यान नदिई जनयुद्धको बेला प्रचण्डले दरबारसँग साँठगाँठ गरेको गंभीर आरोप समेत लगाए । जनयुद्धकालमा प्रचण्डको जुन जुन शक्तिसँग सम्बन्ध थियो, अहिले पनि विप्लवको ठूल्ठूला देशी विदेशी शक्तिसँग सम्पर्क भएको गंभीर आरोप लगाए । अनलाईनखबरले तयार पारेको रिपोर्टको अंश ।
नेपालविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र हुदैँछ
अहिले देशको परिस्थितिको कुरो गर्दा राष्ट्रलाई शान्त रहन नदिने अनेक प्रकारका द्वन्द्वका टुसाहरु ठुल्ठुलै पलाएर पात हालिसकेका थिए, ती साम्य भए । अहिले केही तत्वहरु किनारा लागेका छन् ।
हिंसालाई खेती बनाउने लोकतान्त्रिक प्रणाली हुँदैन भन्ने कञ्चनपुरको प्रशंगमा आएको वक्तव्य हेर्नुभए हुन्छ । जनताले निर्वाचित गरेको प्रणाली हुँदैन भने के प्रणाली हुन्छ ? जनताले निर्वाचित गरेको सरकार हुँदैन भने कसले भनेको चाहिँ सरकार हुन्छ ? राजा महेन्द्रले वीपीलाई त्यही भनेका थिए । जनताले भनेर हुन्छ रु म मान्दिनँ भनेका थिए । जनताको अभिमत नमान्ने भए कसको अभिमत मान्ने ?
शान्तिपूर्ण हैन, बम पड्काएर । उदयपुरमा कांग्रेस कार्यकर्ताको खुट्टो काटिएको छ । एउटा म्यादी प्रहरीमा भर्ना भयो, उसको ज्यान गयो । अर्को ठाउँमा अर्को नेताको गाडीमा प्रहार भयो । भोजपुरमा गाडीमा प्रहार भयो । नुवाकोटमा गाडीमा प्रहार भयो । यी सबै राजनीतिक पार्टीका नाममा भएका अराजनीतिक आतंककारी क्रियाकलाप हुन् । यस्ता तत्वहरु, यिनलाई थुन्न गाह्रो छ । यिनको कहाँकहाँ सम्म पहुँच त्यो डरलाग्दो छ । भन्न सकिँदैन । क(कसको साथ सहयोग छ, क-कसको हात छ ।
नेपालका विरुद्ध गम्भीर षडयन्त्र भइराखेको देखिन्छ । अर्कातिर खुलेआम देश टुक्र्याउँछु भनेर, यद्यपि अहिले शान्तिपूर्ण भनेको छ । तर, देश टुक्राउने कुरा गरेर, भौगोलिक अखण्डतालाई चुनौती दिएर, शान्तिपूर्ण भन्दै । माओवादीले पनि हिजो त्यही भनेको थियो ।
माओवादीले ‘यो राजतन्त्रविरुद्ध हामी होइन क्यारे’ भन्दै दरबारमा मान्छे पठाएर साँठगाँठ गरेकै थियो । सेनाविरुद्ध हामी छँदैछैनौं भनेर विभिन्न जर्नेलहरुसँग साँठगाँठ थियो । ती माओवादी खुल्ला हुनेवित्तिकै मनोनित सांसद हुन पुगेका पनि थिए । जर्नेल हुँदाखेरि ती मान्छे नेपाली सेनाको जागिर खाएर माओवादी नेताहरुलाई बोकेर कुद्थे गाडीमा ।
त्यसकारण लिंकेज कसको, कहाँ भनेर भन्न गाह्रो छ । अहिले पनि म व्यक्त गर्दिनँ यो । तपाईहरुले, न पहुँचे कवि, त्यहाँ पहुँचे पत्रकार ! तपाईहरु जान्नुहुन्छ, मेरो त्यत्रो धेरै एक्सेस छैन । तात्कालीन जनयुद्धको नेतृत्व अहिलेका सत्तासीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए । अप्रतक्ष रुपमा ओलीले प्रचण्डलाई दरबारसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएका छन् ।